Ukujongana nokufa kunye ne-Tenon Joints
Ukudibana kokubambisa kunye neetonon ziphakathi kwamalungu aqinileyo ekusebenzeni ngomthi, kwaye zisetyenziselwa iiprojekthi ezinokwakhiwa kwesakhelo kwaye kufuneka zomelele. Izitulo kunye neetafile ziyazisebenzisa njengoko uninzi lwezoBugcisa kunye nezoBugcisa kunye nefenitshala yesitayile soMsebenzi.
Amalungu okubambisa kunye ne-tenon eza kwiindidi ezininzi-ayeke / angaboni, adlula, ajikeleza, atshatiswa, kunye nezinye ezininzi- kodwa zonke zinamalungu afanayo asisiseko: i-mortise (ikhefu elisikiweyo kwisiqwenga somthi esamkela i-tenon ) kunye ne-tenon (ulwimi olusekupheleni kwebhodi ehambelana nokubola).
Nantsi intshayelelo yendlela yokwenza ezintathu zezona ndawo zixhaphakileyo ze-mortise-and-tenon joint - ziyekwe, zigqitywe, zaza zangiswa. Unokwenza naliphi na kula malungu ngokudibeneyo okanye ngokudityaniswa kweendlela. Ukuba ugqiba ukwenza umsebenzi omkhulu wokhuni konke konke, uya kuba yingcali ngokukhawuleza ekwenzeni la malungu nokuba wenza njani.
Iilishumi zinokwenziwa kunye okanye ngaphandle kwazo amagxa (isikwere esikhutshiweyo kwitoni, jonga umfanekiso 1). Yeyiphi indlela okhetha ukuyenza ixhomekeke kuyilo lweqhekeza kunye nobuchule bakho ekwenzeni amalungu. Ingcebiso: Itoni enamagxa inokufihla ngaphantsi kokujoyina okugqibeleleyo.
Umzobo 1: I-tenon inokwenziwa (ngasekhohlo) okanye ngaphandle kwamagxa (ekunene).
Ndingayithatha itylenol nge-diclofenac
Kumisiwe / kuyimfama
UKUYA yeka (ukungaboni) ukudibanisa kunye ne-tenon ngokudibeneyo yenye apho i-tenon ifihlwe ngokupheleleyo ekufeni (jonga umfanekiso 2). Olu hlobo lwe-tenon luhlala lusetyenziswa kwitafile nakwisihlalo semilenze okanye naphina kwenye indawo ongafuniyo ukuyibona ngokudibeneyo.
Umzobo 2: Idibeneyo ye-mortise-and-tenon edibeneyo isetyenziselwa isihlalo kunye nemilenze yetafile.
Ukusika i-mortise nge-benchtop mortiser:
1. Phawula ukubhubha ebhodini yakho.
2. Khetha isilinganisi sokubambisa esifana nobubanzi be-mortise yakho ngokusondeleyo (ngaphandle kokuya ngaphezulu).
3. Cwangcisa ucingo ukuze i-workpiece yakho ibekwe ngokuchanekileyo phantsi kwebhit.
4.Seta ubunzulu bokunqunyulwa kwesixhobo.
5.Ukumba kancinci, yenza umngxunya wakho wokuqala kwelinye icala lesidumbu.
6. Yenza ukupasa okulandelayo kwelinye icala lobomi.
7. Ukugqagqana ngesiqingatha sobubanzi besuntswana, ukubhola / ukutshizisela konke ukubhubha.
8. Coca umngxuma ngentshono xa kukho imfuneko.
Oku kuyakuxhomekeka kwisuntsu lakho kunye nemodeli yesixhobo onaso. Abanye basika ucoceko kunabanye.
Kwimizi ebolileyo ebanzi kune-bit yakho, kuya kufuneka uyiphinde le nkqubo emva kokuhlengahlengisa ucingo ukucoca yonke indibaniselwano.
Ukusika i-tenon kwitafile wabona:
1. Phawula ukusikwa kumacala omabini ebhodi ukuze kwenziwe imixholo.
2.Seta ubunzulu bokunqunyulwa kubukhulu obufunayo kwi-tenon embindini webhodi.
3. Usebenzisa isilinganisi sakho semeta, yenza umgca usike kwaye wondle iinkuni ngesaha.
Ukuba i-tenon yakho inde kunokuba i-dado blade yakho ibanzi, kuya kufuneka wenze ngaphezulu kwesinye.
4. Jika ibhodi wenze elinye icala.
5. Coca i-tenon nge-chisel ebukhali.
Ukuba ufuna ukufaka igxalaba kwitonon, phinda le nkqubo ubeke kuphela ibhodi kumda wayo endaweni yobuso bayo.
Qiniseka ukuba useta kwakhona ubunzulu bokunqunyulwa kwamagxa.
UKUYA ngokudibana kwe-mortise-and-tenon ngokufanayo iyafana nokufa okunqunyanyisiweyo kunye ne-tenon ngaphandle kokuba i-tenon ihamba ngokupheleleyo kwibhodi efileyo ukuba ibonakaliswe kwelinye icala (jonga uMzobo 3). I-mortise kunye ne-tenon sisiseko sobugcisa befenitshala yobugcisa kwasekuqaleni kweminyaka ye-1900.
Umzobo 3: Ukudibana ngokudibanisa kunye nokuhlangana kunye nelinye lawona malungu mahle onokuwenza.
La manyathelo alandelayo akubonisa ukuba ungayenza njani le ndibaniselwano ngomatshini wokuprinta kunye ne-chisel kunye netafile esetyenzisiweyo usebenzisa i-tenoning jig.
Ukusika ukubola ngokucinezela kunye ne-chisel:
2. Khetha i-drill bit ehambelana nobubanzi be-mortise yakho ngokukhawuleza (ngaphandle kokuya ngaphaya).
I-delsym yokukhwehlela isiraphu yokulinganisa
7. Khupha konke okushiyekileyo ngokubeka ibhiti ecaleni komngxuma wangaphambili kwaye uqhubele phambili usiya kumngxuma wokuqala owombileyo.
Musa ukugqobhoza imingxunya kuba oku kubeka uxinzelelo kancinci kwaye kudala imingxunya engalinganiyo.
8. Cima okuseleyo kweenkuni ekufeni ngeshelisi yakho.
Ukwenza i-tenon etafileni ibone nge-tenoning jig (i-tenoning jig ikunceda ubambe ibhodi ngokuthe nkqo; jonga uMzobo 4):
Ukuba awunayo i-tenoning jig, landela amanyathelo amisiweyo / ayimfama we-tenon ukusika i-tenon kwitafile.
Umzobo 4: Ijig ye tenoning yenza ukuba ukusika iithoni kube lula.
1. Phawula ibhodi yakho ngokusika.
Iipilisi ezirhangqileyo ezimthubi eziyi-15 meloxicam
2. Cwangcisa ubunzulu bokunqunyulwa kwetoni.
Oku kungo-1/3 ubukhulu bebhodi.
3. Usebenzisa isilinganisi-mitha kwisandla sasekhohlo, baleka ibhodi ngesarha ukusika i-cut-blade-blade-wide cut in the mark.
4. Jika ibhodi usike kwelinye icala.
5. Thatha igeyile yakho kwisilinganisi semitha uyibuyisele ngejig yokwehlisa umhlaba.
6. Bamba ibhodi nkqo kwijig.
7. Nyusa ikhaba ukuya kubude beetoni.
8. Qhuba ibhodi ngesarha (jonga kuMzobo 4).
9. Guqula ibhodi ujikeleze kwaye uphinde inkqubo.
An I-angled mortise kunye ne-tenon iqhele ukusetyenziswa kwizitulo kuba uloliwe uphuma emlenzeni ngekona (jonga umfanekiso 5). Nangona kunjalo, le engile iyenza ngokudibeneyo inkohliso. Unokwenza i-angled mortise kunye ne-tenon ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo: ngokujolisa i-tenon okanye ngokubamba i-mortise. Yiphi oyikhethayo eya kuxhomekeka kwisitayile sakho kunye neprojekthi osebenza kuyo. Eli candelo lichaza zombini iindlela onokukhetha kuzo.
Umzobo 5: Idibeneyo ye-mortise-and-tenon edibeneyo ihlala isetyenziselwa izitulo. Ngomxholo we-angled (ngasekhohlo), kunye ne-angled mortise (ngasekunene).
Awudingi ukuba ujonge zombini i-mortise kunye ne-tenon, enye okanye enye.
Kubantu abaninzi, indlela elula neyona ichanekileyo yokwenza i-angled tenon ngesandla. Nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe:
1. Phawula intsingiselo yakho njengoko kubonisiwe kumfanekiso 6.
Umzobo 6: Ukwenza i-angon tenon, sika amagxa kuqala kunye nezidlele ngokulandelayo.
2. Sika igxalaba kuqala usebenzisa i-handsaw.
3. Sika ukusika izidlele (amacala abanzi we tenon).
Ukwenza i-angled mortise:
1. Beka iqhekeza ukuze lifakwe kumthi we-angled kwaye ulibethelele ebhentshini.
2. Sika i-mortise njengoko ubuya kusika i-mortise yesiqhelo, kunye ne-chisel yakho, i-drill press, okanye i-benchtop mortiser ejonge etafileni (jonga uMzobo 7).
Umzobo 7: Ukwenza i-angled mortise, xhasa umsebenzi wakho kwi-engile kwaye usike njengesiqhelo.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-zicam
ioyile ye-cbd iyanceda nge
isiselo seediliya silungile kuwe
idlala i-dvd kwiwindows 10
I-zyrtec ikwenza wozele
cream yokwenene isiqabu iintlungu